သငျသညျအသီးအသီး Papa သစ်တော်အဆင့်ကိုချဉ်းကပ်လမ်းကိုသင့်ရဲ့အဆုံးစွန်အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ကျရှုံးအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်. တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်များသည်ဤရည်ရွယ်ချက်များကိုမကြာခဏအနည်းငယ်ပိုထင်ရှားတဲ့နိုင်ပါတယ်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေမြဲနေစဉ်. တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်အရိပ်အမြွက်ရှိပါတယ်, သငျသညျခေါငျးမာမာကိုသင်တို့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲတွေတဲ့သူတွေထဲကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်မအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်!
လာသောအခါ '' မီးလောင်မှသိကြ’ နှင့် sizzle အအေးလာသောအခါ – Papa လျှံကြီးမြတ်များမှာ, သူတို့သည်သင်၏ဖေဖေအအေးကိုရပ်တန့်ကြောင်းဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ spiky အသီးထောင်နိုင်ပါတယ်, သူတို့ငရုတ်သီးမှတဆင့်မီးမရှို့နိုင်ပါတယ်, သီး, ဝက်သစ်ချသီး & ပိုမိုမြန်ဆန်မုန်လာဥနှင့်သူတို့ပြန့်ပွားနည်းနည်းအစိမ်းရောင်မြန်နှုန်းသင့်ရဲ့လမ်းအတွက် bumps ကြောင့်ပဲသီးတောင့်တက် crisping များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောများမှာ. သို့သော်တက်ကြွစွာမီးတံသင်ရှာသည့်အခါအပေါင်းတို့နှင့်တကွကုန်ကျစရိတ်မှာသူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်လာသောအခါသူတို့သည် သိ. မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်အဖြစ်အချို့သောအဆင့်ဆင့် 77 သို့မဟုတ် 90.
ဒါ့အပြင်ထုတ်စစ်ဆေး Candy Crush ဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်!
အဆိုပါ Pearibbean ၏ Pirates မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်! သငျသညျ Papa ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာရန်သင့်လမ်းအပေါ်ကောင်းစွာဖြစ်ကြ၏ကြမ်းတမ်း Fruity သစ်တောများ၏ကူးနှင့်သင်၏တိမ်းညွတ်ပြီးစီးခဲ့ဘဲလျက်…သာ 300 သွားလာရင်းမှထူးဆန်း! ကျွန်မရှေ့မှာကဆိုပါတယ်ခဲ့ကြပေမည်ပေမယ့်ဒီအဆင့်ကိုတစ်ဦးသင်ယူမှုအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးလှသည်, ဂိမ်းမှတစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုဒြပ်စင်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆက်တွဲခက်ခဲအဆင့်ဆင့်ပျော်စရာစိန်ခေါ်မှုမဟုတ်အရွက်သင်ဘဲရေကန်သို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပစ်၏သက်ရောက်မှုစဉ်းစားထားတဲ့အများစုခက်ခဲတာဝန်အောင်မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်…ဟုတ်ကဲ့ကောင်းစွာကျွန်တော်အကြောင်းပြောဆို wont! ‘
level 16 သူတို့အားစိတ်ဆတ်ပုံးတက်မီးများ၏တာဝန်နှင့်အတူအပြာ yonder သို့အစုံကျွန်တော်တို့ကိုချွတ်, သင်တန်း၏လမ်းတလျှောက်အနည်းငယ်အတားအဆီးနှင့်အတူ. နှင့် 90 000 သငျသညျဝင်ငွေမှတ်သင့်ရဲ့အသီးအသီးလိုအပ်မယ့် 20 Papa! ငါကနဦးအကြံပြု
တိုင်းယခုပြီးတော့ (နှင့်တိုးပွားလာပုံမှန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသုံးဆဂဏန်းထိတစ်ကြိမ်) သင်တစ်ဦး Papa သစ်တော် '' အရှိန်အဟုန်များ '' ကိုဖြတ်ပြီးလာ. သငျသညျတဖြည်းဖြည်းသင့်ရဲ့ Papa ပြည့်စုံ၏ Hang get အတိုင်းဤ Saga အတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းအစအဦး၌အပွေးညီဖြစ်ပါတယ်’ အမြန်နှုန်းနှင့်ဒုံးကျည်သွားလမ်း. ဝန်ခံရမည်အချို့အဆင့်ဆင့်အခြားသူများထက်ပိုခက်ဖြစ်ကြပေမယ့်ဒီယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များပြီးမြောက်ရန်နည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်ဆိုလိုတယ်, သူတို့ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းဒီအချို့ကိုဖြောင့်ရှေ့ကိုအဖြစ်မဟုတျပါ…ပြီးတော့တူသောအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ် 111.
ဒီအဆင့်ဟာအတော်လေးဖြောင့်ရှေ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်, အလဲထိုးသည် 45 မုန်လာဥနီနှင့်တစ်နိမ့်ဆုံးဝင်ငွေရ 150 000 မှတ် ..(အဆိုပါအချက်များနှင့် ပတ်သက်. မေ့လျော့ dont ကျေးဇူးပြုပြီး, နောက်ဆုံးတော့ကြောင်းတွေ့ရခဲသောနောက်ဆုံးမုန္လာဥနီလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ရမှတ်အပေါ်ရေတိုတက်လာမယ့်ထက်ပို frustrating ဘာမှမရှိဘူးငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ) သို့သော်ဤအမှု၌ရူပအဖြစ်လှည့်ဖြားကြသည် 111 ခဲယဉ်းသည်! ကအနည်းငယ်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်ကံတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်!
သငျသညျသည်ပြုပါရန်ရှိသည်ပထမဦးဆုံးအရာအချို့မီးတံသင်စေ, မှတ်မိသည်ဤသည်အခြားမျက်နှာပြင်၏တစ်ဖက်ကနေသစ်တော်သီးလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ပြု, ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာအနီရောင်ငရုတ်သီးဖျက်ဆီးခံရမီသင်ဤပထမဦးဆုံးအလုပျအရေးကြီးပါသည်. အခုတော့ထွက်ရှိသောသငျသညျထိပ်ညာဘက်ထို့နောက်လျင်မြန်စွာအပြည့်အဝအာဏာကိုရိုက်ချက် left ထိပ်အပြည့်အဝအာဏာကိုရိုက်ချက်စတင်နေဖြင့်နှစ်ဦးကိုမီးတံသင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, သင်မှန်မဟုတ်ရင်သူတို့ကအလယ်ထဲမှာကူးအဖြစ်နှစ်ခု Papa တစ်ဦးချင်းစီကတခြား hit အချိန်လျှင်ဤသို့သော်သာအလုပ်လုပ်တယ်. ဒီအဖွင့်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ပတ်ပတ်လည် Play, သင်ကလက်ဝဲသို့မဟုတ်ညာဘက်နှစ်ခုတံသင်ရိုက်ကူးအလုပ်လုပ်စေ. ငါဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အနည်းဆုံးနှစ်ခုမီးတံသင်ရှိခြင်းအောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းယုံကြည်, အစမှာပြီးသားဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်နှစ်ခုမီးတံသင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လုပ်ဆောင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအနီးဖြစ်ကြပြီးသူတို့ play ကိုအကောင်းဆုံးအခန်းကဏ္ဍသင်တို့မီးဖေဖေ၏ဘဝတိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
အဘယ်အရာကိုဒီအဆင့်ကိုလှည်စေသည်ဝါးအပိုင်းပိုင်းအကြားမှာရှိတဲ့ရိုးရှင်းစွာမုန်လာဥနီ၏ positioning ကိုဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျသီး၏ပထမဦးဆုံးအတန်းကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အတွင်းလက်ပစ်ဗုံး pin ကိုသက်ဝင်စေဖို့မုန်လာဥနီထဲမှာအာကာသ crack ဖို့မီး pin ကိုသက်ဝင်စေလျှင်အောက်ခြေထောင့်အပေါ်မုန်လာဥနီအတော်လေးလွယ်ကူထိခိုက်ဖို့ရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးလက်ပစ်ဗုံး pin ကိုထိမှန်လျှင်မှတ်မိဖို့တစ်ဦးကနေရာလေးကိုအစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး (အစိမ်းရောင်သူတွေကို) တစ်ခုပြီးသားလျှံဖေဖေနှင့်အတူ, ဒီဖေဖေထို့နောက် ပို. မျက်နှာပြင်ဧရိယာဖန်တီးခြင်းနှင့်အချို့သောလိမ္မော်ရောင် crunchy လောင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်အရွယ်အစားကိုပင်ထပ်မံ inflates!
Filed Under: Papa သစ်တော် Saga Tagged With: အာနိသင်တိုးမြှင့်, မီး pin ကို, လက်ပစ်ဗုံး pin ကို, level 111, Papa သစ်တော်
Weirdly မလုံလောက်ဘူးလူတိုင်းဂိမ်းကစားရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ (ဟုတ်တာပေါ့?) တကယ်တော့ get ဘက်မှာ cranky သတိပေးချက်တစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ Newsfeed ကို၎င်းတို့၏ facebook စာမျက်နှာသို့မဟုတ် * သက်ပြင်းရှူး * ထိတ်လန့်ထိတ်လန့်ကြီးစွန်းအထိပေါ်နိုင်သည့်အခါသောသူတို့အားရှိပါတယ်! ကောင်းသောသတင်းသူတွေကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောမိတျဆှမြေား upsetting မပါဘဲဘဝတွေကိုနှင့်အဆင့်ဖွယ်ရှိနေသည်အကူအညီအတွက်သင်တို့အလိုအစာကျွေးဖို့အချို့သောကြီးမြတ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်နေသည်!
သင့်ရဲ့မဟာမိတ်များရှာမည်! ထွက်ကြွေးကြော်ခြင်းနှင့်သင်သိပါစေရန် Papa သစ်တော်ကစားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူငယ်ချင်းများကိုအပေါ်သို့ Facebook က status ကိုခေါ်ဆိုမှုထုတ်ပစ်, ငါ app ကိုကစားသူကလူများ၏စာရင်းများကိုတက်အောင်လေ့ကိုသိ (အဘယ်သူထင် play သင့်တယ်) ဒါပေမဲ့အဲဒီ cant တကယ်အပေါ်မှီခိုခံရ, တစ်စုံတစ်ဦးကများလွန်းနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ပါလျှင်, သူတို့ကြိုးစားသည်အဘယ်အရာကိုထွက်တွက်ဆဖို့မတော်တဆဂိမ်းအခွင့်အာဏာခဲ့ကြပေမည်. သငျသညျတခါနှင့်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူအလုံးစုံတို့အဘို့အငြင်းအခုန်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်, သင်အဖြစ်ဆိုးအဖြစ်ဘဝတွေကိုကစားနှင့်လိုအပ်ကြောင်းသူကိုထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, သူကိုစာနာခြင်းနှင့်ထုတ်ကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိ (များသောအားဖြင့် farmville ဝါသနာရှင်များ!) သူ အမှန် ဂရုမစိုက်ပါဘူး, ကဲ့သို့, သို့မဟုတ်ဂိမ်းတောင်းဆိုမှုများကိုမခံမရပ်နိုင်ပါတယ်…ဟုတ်တယ်သူတို့ကလူအသိပေးတစ်လမ်းရှိ, ယေဘုယျအားဖြင့်ကျယ်လောင်စွာ!
သငျသညျအဘယ်သူသည်သင့်ရဲ့ '' စစ်မှန်တဲ့ကိုသိသည်နှင့်တပြိုင်နက်’ သူငယ်ချင်းများကိုတစ်ဦးစမတ်စာရင်းအောင် start နေကြတယ်, သင့်ရဲ့ privacy settings တွေကို၌ဤဖန်တီးမိတ်ဆွေ '' ပေါ်ကလစ် နှိပ်. လူတွေ add’ ဒီသင်ဖျက်ပစ်ရန် option ကိုသို့မဟုတ် 'Edit ကိုသူငယ်ချင်းများစာရင်း' 'ငါပေးမည်, ဒီရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင့်မတ်စာရင်းသူတို့ကို add! Facebook ကမှပို့စ်တင်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးဤ option ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ထို့နောက်၎င်း၏တဲ့ကိစ္စ (အများပြည်သူ, မိတ်ဆွေများက, အသိအကျွမ်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းကစား!)
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့၏ access ကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်လုံလုံခြုံခြုံကျပန်းသူချင်း Papa သစ်တော်ပရိသတ်တွေ add နိုင်ပါတယ်, မှန်မှန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့ privacy settings တွေကိုစစ်ဆေးဖို့ကချေ!
Papa သစ်တော် Saga – အဆင့်ဆင့် 8-15
ယခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအကောင်း Papa သစ်တော်သီးပုံစံထူထောင်ရန်သင့်လမ်းအပေါ်ကောင်းစွာဖြစ်လိမ့်မည်, ကထိန်းချုပ်သင့်ရဲ့ Papa သစ်တော်သီးလမ်းကြောင်းရန်အသုံးပြုရအနည်းငယ်ကြာပေမယ့်
Papa သစ်တော် Saga အရိပ်အမြွက်, အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်
လူတိုင်းဟာအကောင်းတစ်ဦး Saga ညာဘက်ကိုချစ်သောသူ? ထိုအ Papa သစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး
Papa သစ်တော် Saga – အဆင့်ဆင့် 1-7, တစ်ဦးမိတ်ဆက်.
သင့်ရဲ့ Papa သစ်တော်ခရီး၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, သို့မဟုတ်ယင်း၏လေ့လူသိများ 'ဆိုတဲ့ Fruity သစ်တော' 'အဖြစ်. အများဆုံးဂိမ်းတွေနဲ့လိုပဲပထမအဆင့်ဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်ရှိသမျှကိုကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးရန်အပ်နှံသည်, ဘုရင်မှာ developer များကဒီမှာကျနော့်အမြင်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဖြစ်ကြောင်း! သူတို့ဟာအတွက်အငြိမ့်ကိုသင်ယူတာပဲတဲ့လမ်းအတွက်သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုတစ်နည်းနည်းသရုပ်ပြစီမံခန့်ခွဲ!
level 1 ကျနော်တို့ Papa သစ်တော်ဖြည့်ဆည်း, တစ်ခုတည်းသော hit acorn နှင့်အစဉ်အဆက်အရသာမုန်လာဥ! ငါတို့သည်သင်သာကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းဆုံးတောင်းဆိုဖို့ကြိုးစားအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သုံးသစ်တော်သီးရှိနိုင်ပါသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ 10 000 မှတ်.
level2ရောသမမွှေများတဲ့ acorn နှင့်အတူအချို့သောသီးထကျနော်တို့ remove အားမှဤယူသုံး hits နားလည်သဘောပေါက်, သူတို့ကဒီသံသရာ၌ရှိကြ၏ဘယ်မှာသင်သည်သူတို့၏အရောင်အားဖြင့်ပြောပြနိုင်. နောက်တဖန်ဒီအဆင့်ကိုသင်တို့တွင်အနိမ့်ဆုံးအဘို့ရည်ရွယ်ထားအဖြစ်ကြိုးသင်ယူခြင်းအကြောင်း 15 000.
level3ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောဂုဏ်သရေရှိများအတွက်ရည်ရွယ်ဖို့ကြိုးစားအဖြစ်ကတချို့ကပူနှင့်အရည်ရွှမ်းငရုတ်သီးဆောင်တတ်၏ 18 000 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား. ဒါဟာအစအဦး၌သင်တို့၏မုန္လာဥနီတံသင်၌ရှိသမျှကိုထုတ်ရှင်းလင်းဖို့အစဉ်အမြဲပညာရှိရာမသည်အဘယ်ကြောင့်ဤအမှုအဆငျ့ပြ, အရမ်းလျင်မြန်စွာဒီအောက်ဆုံးအလွှာဆုံးရှုံးနှင့်သင်ပယ် bounce ဖို့ဘာမျှမရှိသည်လိမ့်မယ်.
level4ကိုစူပါချစ်စရာအစဉ်အမြဲနေရာလေးကိုဘလူးဘယ်ရီ squishies တွေ့ဆုံရန်ပေးနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားစပျစ်သီးကိုဝိုင်းရံအပြာရောင်တံသင်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုအမြဲတမ်းကရိယာများမှာ, သူတို့ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်နှင့်သင့် Papa သစ်တော်သီးမှအပိုတုံထည့်သွင်းအတွက်အသုံးဝင်သောအခန်းကဏ္ဍမနိုင်, သငျသညျစုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်အဖြစ်အမြော်အမြင်ရှိရှိသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့သင်ယူ 15 000 မှတ်!
Filed Under: Papa သစ်တော် Saga Tagged With: Papa သစ်တော် Saga
Papa သစ်တော်တံသင် – အထူးအာနိသင်တိုးမြှင့်သစ်တော်သီး
အရေးယူဆောင်ရွက်မှုထဲမှာတချို့က Papa တံသင်!
Papa သစ်တော်အာနိသင်တိုးမြှင့်တံသင် Candy Crush နှင့်ညီမျှများမှာ’ အထူးသကြားလုံးများနှင့်စူပါပေါင်းစပ်. သင့်ရဲ့ Papa သစ်တော်ရုံနည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာဘုတ်အဖွဲ့န်းကျင်ချပစ် Get နှင့်သင် ရရှိ. တစ်ခုချင်းစီကိုကောင်းမြတ်ခြင်း၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားအရသာရှိသည်ငါးခုအထူးတံသင်တဦးနှင့်အတူဆုခခြံနေကြတယ်! ဘုတ်အဖွဲ့တံသင် activated ခံရဖို့တစ် Papa သစ်တော်ခြင်းဖြင့်ဝင်တိုက်ရမည်ဖြစ်သည်အပေါ်ပြီးတာနဲ့, အဆိုပါသစ်တော်ထို့နောက် pin ကို၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ဦးမည် မူတည်.
Filed Under: Papa သစ်တော် Saga Tagged With: Boosters, Papa သစ်တော် Saga, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတံသင်
အဆိုပါ Papa သစ်တော် Saga ကဘာလဲ?
ရှငျဘုရငျနောက်တဖန်ပြုတော်မူပြီ! သူတို့ဟာညာဘက်ဦးနှောက်၏ပျော်စရာစင်တာချွတ်ပြန်ပြီးကြောင်းရသေးအခြား terrifyingly စွဲလမ်းနှင့်တက်ကြွဂိမ်းလွှတ်ပေးရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်၏အ psyche သို့မြားပါပြီ! ..ကောင်းပြီမျိုး, ၏ပေမယ့်မလိုက်တယ်လမ်းအတွက်!